‘छक्का पञ्जा ३’ को आक्रमक व्यापार (भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘छक्का पञ्जा ३’ को आक्रमक व्यापार (भिडियो सहित)
काठमाडौं । घटस्थापनाको दिनबाट देशैभर प्रदर्शनमा आएको ‘छक्का पञ्जा ३’ले आक्रामक शुरुआत गरेको । दिपाश्री निरौला निर्देशित चलचित्र हेर्न देशभर दर्शकको घुइँचो लागेको छ ।
जातीय विभेद, विद्यालयमा हुने राजनीति, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी जस्तो संवेदनशिल विषयमा बनेको चलचित्रले वाहवाही पाइरहेको छ । चलचित्रको कथा दीपकराजले लेखेका हुन् ।
यस अघिका फिल्ममा मनोरञ्जन मात्रै प्रदान गरेको आरोप लागेकाले ‘छक्का पञ्जा ३’ मा मनमेरञ्जनसँगै शिक्षा दिएको दर्शकको अभिव्यक्तिले निकै उत्साह निर्देशक दिपाश्री निरौलाले बताइन् । चलचित्रप्रति दर्शकको उत्साहपूर्ण क्रेजलाई मध्यनजर गर्दै मल्टिप्लेक्समा सोमबार साँझबाटै बुकिङ खुलाइएको थियो ।
चलचित्रमा प्रियंका कार्की, वर्षा राउत, सञ्जोग कोइराला, स्वस्तीमा खड्कालगायतका कलाकारहरुकोसमेत अभिनय रहेको छ ।